Maxaa sabab u ah cunno yarida ka jirta Soomaaliya? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxaa sabab u ah cunno yarida ka jirta Soomaaliya?
Maxaa sabab u ah cunno yarida ka jirta Soomaaliya?
Xildhibaan Cabdi Cali Xasan waxa uu Golaha Shacabka kahor sheegay in dalka cunno yari ka jirto, Sababta ka dambeysa ayuu ku sheegay qorshe la’aanta Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdi ayaa tilmaamay in Daadadka Roobka, Fatahaadda Wabiyada iyo Ayaxa saameyn taban ku reebeen dhul beereedka laga soo guro abuurka sanadka ee beeraleyda Soomaaliyeed.
“Guud ahaan Afrika gaar ahaan Bariga waxaa ka taagan cunto yari, Wasaaradda Beeraha XFS oo howshaan lahayd waa ay ka gabtay, maadaama aysan u dajin qorshe siyaasadeed ay ku maareyneeso wax ka qabashada Fatahaadda oo marar badan wabiyada ay sameeyeen, Daadadka Roobka iyo Ayaxa” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Cali Xasan.
Xildhibaan Cabdi Cali ayaa labo arrin ku sifeeyay wax ka qabasho la’aanta dhibaatooyinkaan heysta Beeraleyda Soomaaliyeed ee sababtay in dalka laga dareemo Cunno yari oo xaaladda kasii dari karta haddii aan dabaqabad la sameyn.
“Wax ka qabasho la’aanta Dhibaatada jirta waa labo arrin middood, waa in ay liidato aqoonta Wasaaradda ama in aysan dan ka lahayn maareynta musiibooyinkaas oo dhibaato dhaqaale sababi karta” ayuu sii raaciyay Xildhibaan Cabdi.
Maqaal horeYaa bixiyey telada lagu dhisay hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta NISA?
Maqaal XigaWasiir Goodax Barre oo maanta ku wajahan degmada Balcad+Ujeedka